Kukhethwa phansi efudumele ngokuqinisekile inkinga ebalulekile, kodwa kukhona abantu abangafuni banake ezinye izinkinga eziningi ezihlobene ngokuqondile nge izibuya eshubile. Futhi ikhambi lale nkinga, empeleni akukhona njalo kulula njengoba kubonakala efika kuqala, ngoba izinikele - Ukukhethwa thermostat for Ukushisa phansi. Uma ufuna ukuqonda ukuthi izakhiwo kanye izici thermostat ukuze ngonanzelelo, futhi yini - asikho isaziso, uqinisekise ukuthi ufunda isihloko yami kuze kube sekupheleni.
Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko of amath- - control manual ehlelwe. Wagcine njalo predetermined amath- lokushisa manual ukulawula izindlela. Kulesi simo, ukunciphisa noma ukwandisa izinga lokushisa for Ukushisa phansi, ngeke uyifake isikhathi ngasinye.
ukusebenza okwenziwa ngesandla ngendlela engcono efanelekayo amakamelo lapho isikhathi esiningi kunabantu, isibonelo - ngokuba amakamelo esiphilayo efulethini yakho.
A thermostat ehlelwe ivumela ekuqaleni ukufaka Ukushisa phansi ukulawula lokushisa imingcele, bese ngezinye izikhathi kuphela ukwenza izinguquko. Isilawuli yalolu hlobo ukukhombisa kahle uqobo kumagumbi yesibili njenge: okugeza, yokugezela, ikhishi noma ephasijini.
Ngakho-ke, uthola isimo. Ngemva kokuvusa, uvuka phansi efudumele, okwakubekelwa ukufudumala ukukhanya kungangeni ekamelweni lakho ubusuku bonke, beduduzana futhi imfudumalo. Uya okugeza yonkana ihholo, futhi lapho uzizwa imfudumalo efanayo ocansini wakhe, ngoba ngaphambi ngiphaphama, ngokuqondile ifakwe futhi ukufuthelana lokushisa yayo. Ngenxa yalokho, uthola phansi efudumele uma futhi lapho kudingeka ekhaya lakho.
Uma ngosuku endlini yakho ayinalutho, ngakho-ke amakamelo lokuphila kangcono efanelekayo thermostat ehlelwe, kunokuba ngesandla ukulungisa thermostat. Phela, ngosuku izingane zakho - ukufunda, futhi - ukusebenza.
Ukuxhumeka okuqondile phakathi amandla imali futhi uhlobo thermostat.
On ezingeni lelitsite sokushona thermostat kuyinto ekulondolozeni engaphansi ugesi, yingakho, lapho uthenga kubalulekile ukubheka inombolo yezici. Kukhula izilungiselelo kungenzeka, ngakho-ke kuba ukonga. Musa uzisole izimali zabo eliphezulu thermostat ukuthenga bese esikhathini esizayo, uzoba ugcine ugesi. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi khona ukubonisa electronic akuqinisekisi ocebile sici isethi.
Lula nokulawula interface.
Kalula Ukuphathwa-friendly interface lokushisa isilawuli ukudlala indima ebalulekile ukusebenzisa kwayo. Ngesikhathi kokuhlinzwa, isilawuli lokushisa, izingane kanye nabantu abadala bayokwazisa ukubaluleka kwalezi zakhiwo. Nakani kalula ukubeka imingcele futhi khona izinkinobho elula kuyaqondakala.
Ukufakwa kanye thermostat Ingaphandle.
Ezindaweni eziningi, izinga lokushisa abalawuli for Ukushisa phansi, bhekani nice futhi avulekile. Ngenxa design yabo kuyinto izindlu plastic, wabulawelwa ezimhlophe zakudala. Ngesikhathi esifanayo kukhona ezihlukahlukene ongakhetha ukufakwa. Ngokwesibonelo, udonga obandayo, ukuqinisekisa nokungabi khona kwanoma yiliphi indentations e odongeni yakho. kakhulu Isihloko ukufakwa, e podrazetnik, usitshela indlela ukulungiselelwa thermostat. Nokho kukhona indlela ukugibela Din-wesitimela panel ekhethekile. Ngenxa yalokho, i-thermostat ukulingana kahle ku elingaphakathi yakho, sinake indlela yokufaka.
Ngithemba ngobuqotho ukuthi sihloko yami ngandlela-thile ukwandisa HORIZONS zakho emkhakheni lokushisa abalawuli futhi manje kuyoba lula kakhulu ukuba enze ukukhetha. Comfort nokufudumala ekhaya lakho ...
Ukwakha itshe: ukusetshenziswa futhi ezihlukahlukene
Ukuhlobisa izindonga nge panel plastic. Ubuchwepheshe panel odongeni yokuqedela plastic
Apple Tree: nokunakekela yisithombo